Guurka | JumaMap
Waxan ahay qaxooti dalbada/qaxooti rasmi ah/heysta susidiariya/midka bini adamnimada, ma guursan karaa?
Haa, waad guursan karta!
Sharci nuuce ah ayaa la iga rabaa?
Waa in aad u geysa qofka ku shaqada leh warqad vadeeneyso in wadankaga sharciga ka jiro uu kuu fasaxayo in aad guursato magacedana wa ( “nulla osta”).
Muhiim: Hadii aadan tagi karin safardada waxad ka dalban karttaa warqad maxkamada kugu dhaw kadibna waxaad la tageysa komuunka aad guurka ku sameneysid warqada wa in ey asalka ahataa (ASAL Ah) tasoo aad soo qaday ugu badnaan lixbilod gudahooda.
Warqada aan kor kuso xusnay:
– Tag maxkamad ee ka hor cadeey in aadan xaas kale laheen adigo wato laba marqaati;
– Nootaayadaka dalbo adigo wato marqaatiyaal (Marqaati “cadeen”) kuwaaso cadenayo in aad awoodid guur dhinac walba.
Waxaan ahay qaxooti ma guursan kara?
Waa in aad u geysa qofka ku shaqada leh warqad vadeeneyso in wadankaga sharciga ka jiro uu kuu fasaxayo in aad guursato magacedana wa ( “nulla osta”)
Talyaaniga waxa u qabilsan UNHCR ururka calamiga ah ee qabilsan bixinta amarka guur ee qaxootiga.
Maxa loo bahanyahay si aad u weydisato nooleesto guur UNHCR?
1. Warqada maxkamada (mid asal ah) taso ad so qaday lix bilod gudaheda.
Warqada maxkamada waxa sameyo-:
2. Koobiga warqadi aad ku qadatay sharciga qaxootinimo;
3. Koobiga sijoorno anan dhacsaneen;
4. Koobiga sharciga qofka aad is guursaneysaan.
Halkeen u dira si an u helo warqada noolestada?
Waxaad toos u tagi karta xafiiska UNHCR Talyaaniga – Via Leopardi, 24,00185, Roma.
Waxaad u diri karta warqad boosto/mid deg deg ah kuna qor adreeskaga iyo telfoonkaga oo sax ah si laguguso diro nooleestada.
Qofki guurka sameen laha ayaa diidmo isoo siiyay codsigeygi aha in aan guur sameeyo maxaan sameyaa?
Waxaad ka dacwoon kartaa maxkamada adigo u cadeenayo in eeyqaldan yihiin sababihi laguugu diiday guurka ayagana soo amri doono qofka in guurkiisa loo sameyo shuruud la aan.